ထနောင်းရိပ်: June 2013
မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ စာပြန်ပွဲလေးတစ်ခုက ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့။ မိမိရဲ့ ဆရာဖြစ်သူက ဒီအကြောင်းလေး ခဏခဏ ပြောပြီး တပည့်တွေကို ဆုံးမဖူးတာကြောင့် ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
မွန်ပြည်နယ်မှာက စာပြန်ပွဲတွေ များတယ်။ ဒကာဒကာမတွေကလည်း လိုလေသေးမရှိအောင်ကို ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းကြတယ်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က စာသင်သား ရဟန်းငယ်တွေ ကိုရင်တွေဟာ စာပြန်ပွဲချိန်ရောက်ရင် မွန်ပြည်နယ်မှာ ဆုံတွေ့ ကြတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ခုသော စာပြန်ပွဲမှာ မိမိရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာ ထိုစာပြန်ပွဲ ကြီးကြပ်သူအဖြစ် တာဝန်ယူရတယ်။ စာပြန်ပွဲ ချိန်ဟာ နေ့လည်မှာ ဖြေကြရပြီး နံနက်မှာ မြို့အတွင်းသို့ ဆွမ်းတော်ကြီးလောင်း ကြွကြရတယ်။ မြို့သူမြို့သား များ သဒ္ဓါဖွေးဖြူတဲ့မွန်တိုင်းရင်းသူ လေးများဟာ မိမိတို့ အိမ်ရှေ့မှနေပြီး ဆွမ်း၊ သစ်သီး စတာတွေလောင်းကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲတွင်း တစ်ညမှာ ဆရာက အညောင်းပြေ အညာပြေ ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်တယ်။ ထိုအချိန်မှာ အသားကျောင်းလေး တစ်ခု အတွင်းမှာ မီးမပိတ်သေးဘဲ စကားပြောနေသံကြားတာနဲ့ စာအကြောင်းတွေ ပြောနေတာလား သိချင်တာနဲ့ ဆရာဟာ အနားကပ်သွားတယ်။
“အရှင်ဘုရားရယ် တပည့်တော် မနေ့ညက ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူး၊ ဟ ဘာဖြစ်လို့လဲ စာတွေစဉ်းစားနေလို့လား၊ မဟုတ်ပါဘူး ဘုရား တပည့်တော် မနေ့ မနက်က မြို့ထဲ ဆွမ်းတော်ကြီးကြွတုန်းက တွေ့ခဲ့လို့ ဘုရား၊ ဘယ်သူမှတော့ လျှောက်မပြောနဲ့ဘုရား၊ဟာ ဒါဆို ငါ့ရှင် စာမေးပွဲ လည်း ဘယ်ဖြေနိုင်မလဲ၊
စာမေးပွဲတော့ ဖြေနိုင်ပါတယ်ဘုရား၊ စောစောက အိပ်မပျော်ဘူးဆို၊ မှန်ပါ့ နောက်တော့ အိပ်ပျော် သွားပါတယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပြန်တာတုန်း၊ တပည့်တော် သဘောပေါက်သွားလို့ပါဘုရား၊ ဟ လုပ်ပါအုံး ဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားတာလဲ?
“ အော် ငါကသာ စဉ်းစားနေတာ သူကသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ သဘောပေါက်သွားတာဘုရား၊ အဲ့လို သဘောပေါက်တော့ တပည့်တော်လည်း တစ်ရေးပဲ အိပ်ပျော် သွားတော့တာပဲ။
ဒါလေးကြားတော့ ဆရာက ပြုံးပြီးနောက် ပြန်ဆုတ်လာ ခဲ့တယ်။
အော် ဟုတ်လိုက်တာ ကိုယ်သာ သူ့အကြောင်း စဉ်းစားပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေပေမယ့် သူကတော့ အိပ်ယာထဲ သိုးရင်သိုးနေမှာ ။ ကိုယ်ကသာ သူ့ကို ဒေါသတွေထွက်ပြီး ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ အံတကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေတာ သူက သိမှမသိပဲနော်။ အော် သတိရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါသထွက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုရင်ကြီး သဘောပေါက်သလိုသာ ပေါက်လိုက်စမ်းပါ။
ကိုယ်ကသာ စဉ်းစားနေတာ သူက သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး လေ။ သက်ရှိ သက်မဲ့ အားလုံး ကိုယ် သူတို့ အကြောင်းစဉ်းစားနေတာမသိပါဘူး။
သဘောမပေါက်သရွေ့တော့ အိပ်မပျော်ညတွေ တာရှည်နေအုံးမှာပါ
သံသရာ တစ်လျှောက်သဘောမပေါက်လို့ ပြေးလွှားနေခဲ့ရ၊ အိပ်ပျက်ခဲ့ ရတာတွေကို ခုသဘောပေါက်လိုက်
ကြပါတော့။ လောဘကြောင့် အိပ်မပျော်၊ ဒေါသကြောင့် အိပ်မပျော်နဲ့ အော် ဘာတွေကြောင့် ကိုယ့် ကိုယ်ကို
နှိပ်စက်နေအုံးမှာလဲ? ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်ခဲ့ သမျှသည်လည်း သဘောမပေါက်လို့၊ ပျော်မဆုံးဆုံး တပြုံးပြုံးနဲ့
စားမြှုပ်ပြန် နေတာလည်း သဘောမပေါက်လို့နော်။ သက်ရှိသက်မဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသမျှဟာ တဒင်္ဂ ခဏပဲ
သာယာစရာ ထင်နေရင် ကိုယ်ပဲ ခံစားနေရမှာ။ ဒါကို သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။
အော် ဘဝမှာ သဘောပေါက်သွားပြီး လောဘနဲ့ မထိ၊ ဒေါသနဲ့ မငြိပဲ အေးချမ်း သာယာ အပြစ်ကင်းစွာ
Posted by htanaungyeik at 3:16 AM0comments
မိမိတို့ မှော်ဘီ ဓမ္မဒူတကျောင်းနေစဉ်က အမြဲတမ်းလိုလို အလှည့်ကျ တရားဟော ကြရတယ် ။
အောက်မှာ နာယက စာချများက ထိုင်နေပြီး အလှည့်ကျတဲ့ ကိုရင် ဦးဇင်းက ပလ္လင်ပေါ်တက်ပြီး တရားဟော ကြရတယ်ပေ့ါ။
ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း မိမိအလှည့်သို့ ရောက်လာပါလေရော မိမိလည်း ဟောဖို့ စာကြည့်ရတာ တစ်မျိုး အပေါ်ရောက်ရင် ဖြစ်ပါ့မလား ဆိုပြီး တစ်မျိုး စဉ်းစားရင်း ရင်ဘတ်ထဲတော့ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေသလိုပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ညနေ ဘုရားဝတ်တက်ခါနီးမှာ မိမိအခန်းထဲ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ဝင်လာတယ်။
ဦးဇင်း ဟော အလှည့်လား လို့ သူကမေးတယ်။
အေးကွာ တို့လည်း တရားမဟောဖူးတော့ ဘယ်လို ဟောလို့ ဟောရမလဲတောင် မသိပါဘူးကွာ လို့ ဒါနဲ့ အရှင်ဘုရား တရားဟောနည်းယူမလား တဲ့ ဟ ကိုရင်ရ သိရင် လုပ်ပါအုံး ဘုရားဝတ်ပြု ပြီးရင် တက်ရတော့မှာ ဆိုတော့
အရှင်ဘုရားရယ် တရားဟောတာများ မခက်ပါဘူး
ဦးဇင်း ပလ္လင်ပေါ်ရောက်ရင် ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်းပဲ ဟော နားနား ပြီး ဟောပါ၊ တိုးတိုး တိုးတိုးပဲ ဟော အားလုံးလည်း ကြားပါတယ်တဲ့
အောင်မယ် အဟုတ်ထင်လို့ ဟဲ့ ကိုရင် အဲ့ဒါ မျိုးကြီးသီချင်း မဟုတ်ဘူးလားဟ
အရှင်ဘုရားကလည်းနော် တပည့်တော် ပြောတဲ့ နည်းအတိုင်းသာဟော အားလုံး အိုကေသွားမယ်။ လင်းစမ်းပါအုံး ဘယ်လို အိုကေမှာလဲ ဟဆိုတော့
ကိုရင်က ဆက်ပြောတယ် စကားပဲ ပြောပြော တရားပဲ ဟော ဟော ဖြည်းဖြည်း ပြောတာ ကောင်းတာပါ့
တရားဟော ရင်ပိုတောင် အရေးကြီး သေးတယ် နော် သူတို့က နားမလည်လို့ မသိလို့ တရားလာ နာပါတယ် ဆိုမှ မြန်မြန် ဟောရင် ဘယ်သဘောပေါက်တော့ မလဲ။
ဒါကြောင့် ဖြည်းဖြည်းဟောပါ။ နားနားပြီး ဟောတော့ ဦးဇင်းလည်းမမော တော့ဘူးလေတဲ့။ အံ့မယ် ဒီလိုဆိုတော့ ကိုရင့် နည်းက မဆိုးပါလားလို့
ဒါနဲ့ နေပါအုံး တိုးတိုးက ဘာဖြစ်လို့ ဟောခိုင်းရတာလဲ
အော် ဦးဇင်းရယ် ပိန်းပါ့ ကိုကြီးပိန်းလို့တောင် ဦးဇင်းကို နာမည်ပေးလိုက်ချင်တယ်
အောင်မလေး ပြောမယ့်အရေး ငါ့ကို ရင်က ဈေးကိုင်နေသေး
တိုးတိုးဟောတော့ မကြားရဘူးဟဲ့ ဆိုပြီး သေချာ အာရုံစိုက် လိုက်နာတော့ အိပ်မငိုက်တော့ဘူးပေါ့
ဒီလိုဗျ တရားဆိုတာက လူတွေနဲ့ အတော်လေးဝေးတယ်လေ ဦးဇင်းရ လူတွေက တစ်နေ့ တစ်နေ့ အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ ပင်ပန်းလာကြတာ။ ဟော မယ်မှ မလုပ်ရသေးဘူး သူတို့က မျက်လုံး စင်းပြီး အိပ်ငိုက်ကြတာ လေ
တပည့်တော် တစ်ချို့ တရားပွဲတွေ အကဲခပ်ကြည့်တယ် ဘုန်းကြီးက အသံ ကောင်းကောင်းနဲ့ လွှတ်ဟဲတော့ သူတို့ကိုများ ချော့သိပ်တယ် ထင်ကြလားပဲ
အိပ်ငိုက်လိုက်ကြတာ ဦးဇင်းရယ် ဒါကြောင့ ဦးဇင်းကို ပြောတာ တိုးတိုးနော်လို့ အံ့မယ်သူက ချုပ်သွားသေးတာ
ကိုယ့်ဦးဇင်းမိုလို့ နည်းစနစ် တွေ ပေးလိုက်တာနော် အောက်ကနေ နားထောင်နေမယ်တဲ့
ထိုနေ့က မိမိဟာ ပလ္လင်ပေါ်မှာ တရားလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတိုးလေး ဟောခဲ့ တယ်လေ။ ဒီနေ့ ထိလည်း တရားဟောစရာ ကြုံလာတိုင်း ကိုရင်လေးရဲ့ ဖြည်းဖြည်း နဲ့ တိုးတိုး လေးက နားထဲက မထွက်ဘူး
ဒါက ဦးဇင်းတို့မှ မဟုတ်ဘူး အလုပ်လုပ်နေသူတွေလည်း နည်းယူရမှာ သူများနဲ့ယှဉ်လို့ ကိုယ့်စကား အရာရောက်ချင်ပါတယ် ဆိုရင် ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတိုးနော်......။
မောင်ပညာ ( ကေတုမီ )
Posted by htanaungyeik at 11:30 PM0comments
ဖုန်းတစ်ခု ဝင်လာတယ်။ state ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက အရေးတကြီး နဲ့ အရှင်ဘုရား ဖုန်းနံပါတ်မနည်းကို လိုက်ရှာလိုက်ရတာပဲလို့ အားရဝမ်းသာ ပြောရှာတယ်။ မတွေ့တာကြာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖူးသူတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ။
ဒါနဲ့ အကူအညီတစ်ခု ပေးပါအုံး။ ထိုသူငယ်ချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မိမိသည် အကူအညီပေါင်းများစွာကို ပေးဖူးခဲ့၏ ကူညီခဲ့၏။ ယခုလည်းအကူအညီ လိုလို့တဲ့။
ဒါနဲ့ သူကဆက်ပြောတယ်။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကို ကျောင်းတုန်းက ရေးပေးဖူးတဲ့ ရီးစားစာ ကိုမှတ်မိလားတဲ့။
ဟိုက် မိမိသည် စာစီစာကုံးရေးသားရခြင်းကို ဝါသနာပါသလောက် သူငယ်ချင်းတွေအကျိုး သူတို့ရီးစားစာများကို ရေးပေးခဲ့ရဖူး၏။ ကိုယ်သာ မစွံ့သာ သူတို့အားရေးပေးလိုက်သည်များမှာ များသောအားဖြင့် အဆင်ပြေသွားတတ်၏။
ခုတော့ ရဟန်းဘောင်ရောက်နေတာတောင် အလွတ်မပေးတော့ဘူးလားလို့ မေးလိုက်မိတယ်။
အဲ့လို မဟုတ်ပါတဲ့ ကျောင်းတုန်းက ကူညီရေးပေးလိုက်သော စာထဲက စာကြောင်းလေး တစ်ချို့ မှတ်မိသေးလားတဲ့။
ခု သူ့ကောင်မလေးနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် အချိန်မှာ ထိုကလေးမက ပြောသတဲ့ နင် ပထမဆုံးပေးတဲ့ စာထဲမှာပါတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကြောင့် နင့်ကို လက်ခံခဲ့တာ ခု လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ အချိန်မှာလည်း ထိုစာသားလေးတွေ ပြန်ပြောပြီး တောင်းပါလို့ ဆိုသတဲ့။
စာထဲမှာ ဘာတွေရေးပေးလိုက်တာလဲ ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပေးပါအုံးတဲ့။
ကိုယ့်ဖာသာနေသည်ကို အမှုက လာပတ်ဖြစ်အောင် လာပတ်သေးတယ်။ ဒါနဲ့ master brain ကို CPU နှစ်လုံးတပ်ပြီး ပြန်မောင်းရတာပေါ့ မှတ်မိပြီ ဘယ်စာကြောင်းလေးတွေလည်းဆိုတာကို တကယ်တော့ ထိုစာကြောင်းလေးများသည်လည်း မိမိစာသား မဟုတ် ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်သုံးဖူးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ
“ ဘဝါဘဝေ အဆက်ဆက်က နှစ်ဖြာရေစက် ပြုသမျှတွေလျှင် ပါလေချက် သမုဒယ နယ် တစ်ခွင် ဗျာဒိတ်တော်ကြားသကဲ့သို့ ချစ်စကားကြားလိုလှသည် နှမငယ် မဟေသီ" စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ကျေးဇူးအရှင်ဘုရားတဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပင့်မယ်တဲ့ တော်တော်ပါကွာ လို့ မင်းတို့ စုံတွဲတော့ တော်တော်လန့်သွားပြီလို့ တော်ကြာ နောက်ဆယ်နှစ်နေမှ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးမှာဟောသွား တဲ့ တရာထဲက စကားလုံးလေးတွေ ပြန်မေးနေရင်နောက်ထပ် ပြဿနာလို့ ပြောရင်း ဒင်းက ထပ်မေးတယ် အရှင်ဘုရားမှာကော သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရလို နှမလက်လျှော့နေလေတော့လေး ဘာလေး မရှိဘူးလားတဲ့။ အံ့မယ် ဒါမျိုးတော့ငြိမ်ခံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ဟေ့ တို့က လောကီဇာတ်ကြော ဓါတ်သဘောတွေကို ခပ်ပေါပေါလို့ မှတ်ထင်တာလို့ ခပ်ပေါပေါ အလုပ်တွေလုပ်သူတွေကိုလည်း ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေလို့ပဲ မြင်တယ်လို့ မေးမိတာမှားပါတယ် ဆိုပြီးဖုန်းချသွားလေရဲ့။
ဖုန်းသာကျသွားတယ် အတွေးတွေက မတင်မကျ နဲ့ ဒါနဲ့ ဝင်းဦးရွတ်ခဲ့သော ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို တိုးတိုးညီးတွားမိတယ်။
တစ်စစီဖြစ်နေတဲ့အတွေးတွေကို ဖြတ်တောက်ဖို့ အားယူရင်း အရင်ကဇာတ်လမ်းလေးကို တဒင်္ဂမှတ်တမ်းရေးဖို့ ကီးဘုတ်ပေါ်ပြေးလွှားနေသော လက်ချောင်းများကို ထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်း
Posted by htanaungyeik at 3:19 AM0comments
ဒီပိုစ်ကို ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်တာ အချိန်မရတာလည်း တစ်ကြောင်း စာမရိုက်ချင်တာ တစ်ကြောင်း ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးပေး ပျင်းတာဟာ ပေါ်တာပါပဲ။
လူတွေတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်။ ကဲ ဘာတွေပြိုင်ကြသလဲ?
တစ်နေ့ တစ်နေ့ မိမိလည်းပြိုင်မိတာပါပဲ။ မပြိုင်ရဘူးလို့လည်း မပြောပါဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်တယ် ဆိုကတည်းက နိုင်ချင်ကြတာချည်းပါပဲ။
တို့ပါတီ၊ တို့အသင်း တို့လူမျိုး စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်
ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ဆိုတဲ့ အတ္တစွဲလေး ပါနေတော့ တစ်ပါးသူ ဘာဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာ မမြင်နိုင်တော့ဘူး။
ကိုယ်အနိုင်ရဖို့ တစ်ခုတည်း ကြည့်ကြတော့တယ်။
ဒါကြောင့် ပြောတာ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို မမြင်နိုင်ခြင်းက ဖုံး ထားတယ်။ ဒါလေးက စိတ်ကူးထဲပေါ်လာတာလေးပါ။ စာရေးသူက တောင်ငူပြန်ရောက်တိုင်း ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်း ကလေးတွေနဲ့ တွေ့တွေ့ပြီး စကား ပြောတယ် ဆုံးမတယ်
ဒီတစ်ခေါက်ပြန်တုန်းက သူတို့ကို ဒီစကားလေး ပြောပြမိတယ်။
ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အခါ မမြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ ဘာကို မမြင်နိုင်တာလည်းဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို မမြင်နိုင်တော့တာ။ တကယ်တော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်သာ ပြိုင်စရာပါ။ ကိုယ်ဟာ ကျောင်းသားဆိုလည်း မနေ့ ကထက် ဒီနေ့ စာဘယ်လောက်ပိုရသလဲ၊ အလုပ်လုပ်သူဆိုလဲ မနေ့ကထက် မနှစ်ကထက် ဒီနေ့ ဒီနှစ် တိုးတက်လာသလား ကိုယ်ဘယ်လောက် အရင်ကထက် ပိုလာသလဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုလည်း အရင်ကထက် အခု တိုင်ပြည်အပေါ် ပြည်သူပြည်သား အပေါ် ဘယ်လောက် အကျိုးပြုသလဲ ထိုကဲ့သို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမြင်ဘဲ အတ္တနဲ့ပြိုင်နေသရွေ့ ဘယ်သူနိုင်သွားမလဲဆိုရင် အနတ္တကပဲ နိုင်သွားမှာ ဘယ်သူမှမနိုင်ပါဘူး
အနတ္တ ထင်ရှားနေပါလျက် အတ္တက နိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ လောကဓမ္မတွေနဲ့ တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီနော်
သတိကပ်ပြီး ကြည့်ကြပါ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေတောင် နားလည်သဘေညပေါက် သေးတာပဲ
ကိုယ်မနေ့ကထက်ဒီနေ့ ကုသိုလ်တွေတိုး လာပြီလား နိဗ္ဗာန်နဲ့ပိုနီးပြီလားဆို ဆန်းစစ်ရင်း
လောကီ လောကုတ် နှစ်ဖြာ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ
Posted by htanaungyeik at 7:46 PM0comments
တပည့်တော်ကို နေတတ်ထိုင်တတ်အောင် စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ဆုံးမခဲ့တာ ဘုရားတပည့်တော် ထိုစကားတစ်ခွန်း ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကြာရှည်စွာ စဉ်းစားခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ နေတတ်ခဲ့ပါပြီ ပြောတတ်ခဲ့ပါပြီ စိတ်ကူးတတ်ခဲ့ပါပြီ
“ မကောင်းရင် ကင်းအောင်နေ၊ မကင်းရင် ကောင်းအောင်နေ ကွာ” လို့ ဆရာတော်မိန့်ခဲ့စဉ်က တပည့်တော် သဘောပေါက်ခဲ့တာက မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ ကင်းအောင်နေပါ့ ဒီလိုထင်ခဲ့တာ
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေ တစ်အိမ်တည်း အတူနေရတာ မကောင်းတာတွေနဲ့ တွေ့တော့ ကင်းအောင်နေချင်ပေမယ့် မကင်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရပါ့လို့
မကင်းမှတော့ ကောင်းအောင်နေရတော့မှာပေါ့ တကယ်တမ်းဆရာတော် ဆိုလိုလိုက်သော အဓိပ္ပါယ်မှာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း မိသားစုဆိုတာတွေသည် မကင်းနိုင်သော အရာများမဟုတ်ပါလား သူတိုကောင်း ကောင်း မကောင်းကောင်း ကင်းလို့မရတော့ ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေရမှာပေါ့
ကိုယ့်သဏ္ဍာန်ထဲရှိနေတဲ့ လောဘ ဒေါသ ကိလေသာများကျတော့ တကယ့်ကို ကင်းအာင်နေသင့်သော မကောင်းတဲ့ တရားတွေပဲလို့ သဘောပေါက်ပြီး ကင်းအောင်နေရမှာ လောဘနဲ့ ကင်း အလောဘ နဲ့နေ ဒေါသနဲ့ကင်း အဒေါသနဲ့ နေ
ဘုရားတပည့်တော် မကောင်းတာကိုလည်း ကင်းအောင်ကြိုးစားပါမည် မကင်းတာကိုလည်း ကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ့မည် ဘုရား။
ဥပဇ္ဈယ်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ မှော်ဘီဓမ္မဒူတဆရာတော်အား ရှိခိုးပူဇော်ရင်း
Posted by htanaungyeik at 7:04 PM0comments
အဘိဓမ္မာ ပိဋကတ်တော်ထဲက ပုဂ္ဂလပညတ် ပါဠိတော်ထဲတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သော လူလေးမျိုးအကြောင်းကို မှတ်သားဖူးတယ်။ ဘုရားရှင်က လူတွေအကြောင်းကို အမျိုးမျိုး သရုပ်ခွဲပြရင်း ဒီနေရာမှာ လောကထဲရှိတတ်တဲ့ လူလေးမျိုးအကြောင်းကို အကျယ်တဝက့် မိန့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယလူက သူယုတ်မာထက် ပိုယုတ်မာသူ
စတုတ္ထလူကတော့ သူတော်ကောင်းထက် ပိုကောင်းတဲ့သူ
ဒါကို ဘုရားရှင်က ထပ်ဖွင့်ပါတယ်။ သူယုတ်မာဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်က ပါနာတိပါတာ အစရှိသည်ကို လွန်ကျူးတဲ့သူပါတဲ့။ ငါးပါးသီလကို အနည်းငယ်မျှ စောင့်ထိန်းခြင်းမရှိသူပေါ့။
နောက် ဒုတိယလူကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ငါးပါးသီလ မလုံခြုံ မစောင့်ထိန်းသလို သူတစ်ပါးတို့ကိုလည်း ငါးပါးသီလစသည်ကို လွန်ကျူးမိအောင် အားပေး၊ တိုက်တွန်း၊ အဖော်သဟဲပြုသူပေါ့ ။ ထိုသူမျိုးသည် သူယုတ်မာထက် ပိုမိုယုတ်မာသောသူပေါ့။
ထိုရှေ့နှစ်ယောက်သည် မကောင်းသော ယုတ်ညံ့သော သူတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘုရားကဲ့ရဲ့ ချုံချတော် မူတဲ့သူတွေပေါ့။
နောက်တတိယလူကတော့ သူတော်ကောင်းပါ။ သူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့ ငါးပါးသီလ စသည်ကိုစောင့်ထိန်းသူပေါ့။ တခြားသောသူတွေ မစောင့်ထိန်းလို့ ကိုယ်လည်းမစောင့်ထိန်းဘူး ဆိုပြီးနေတာသည် သူတော်ကောင်းစိတ်ဓါတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူတော်ကောင်းဆိုတာ သူကတော်တော် မတော်တော် ကိုယ်ကတော်အောင် ကြိုးစားရမယ် သူကကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ်ကကောင်းအောင် ကြိုးစားရမယ်
နောက်ဆုံးစတုတ္ထလူကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ငါးပါးသီလ စသည်ကို ဖြည့်ကျင့်သလို သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲ ဖြည့်ကျင့်ချင်အောင်၊ စောင့်ထိန်းချင်အောင် တိုက်တွန်းပြောကြား ဟောပေးတယ်ပေါ့ သူတော်လာအောင် ကိုယ်ကကောင်းပေးသူပေါ့ ဒါကတော့ သူတော်ကောင်းထက် တော်တဲ့ သူတော်ကောင်းလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဒီလိုနောက် နှစ်ယောက်လိုလူမျိုးကို ဘုရားရှင်က ချီးကျူးတော်မူပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ တတွေသည် ဘုရာရှင် ချီးကျူးသော သူတော်ကောင်း စာရင်းထဲ ပါဝင်ပြီလား ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာကို စိစစ် ဝေဖန် စဉ်းစားပြီး တော်သည်ထက်တော်အောင် ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by htanaungyeik at 7:18 AM0comments